Kedu otu esi enweta akara azụ azụ dị mkpa na ụzọ dị mfe?
Ị nwere ike ịnụrụ site na isiokwu anyị ndị bu ụzọ banyere njikọ njikọ njikọ maka njikarịcha weebụsaịtị. Backlinks dị oké mkpa maka SEO n'ihi nọmba nke ihe dị iche iche - ha na-emezi visibilite weebụsaịtị na peeji nke ọchụchọ; ha na-akwado ikike weebụsaịtị na Google; ha na-emepụta okporo ụzọ na-agafe na ebe nrụọrụ weebụ, ma na-amụba aha ngalaba. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta njikọ njikọ dị ike iji mee ka okporo ụzọ okporo ígwè ọchụchọ gị dịkwuo elu, ị ga-achọ ezigbo backlink atụmatụ nke na-arụ ọrụ maka gị.
Ka anyị kwuo ụfọdụ okwu banyere ọrụ backlinks na nhazi usoro. Backlinks bụ echiche dị mfe - mgbe ụfọdụ ngalaba njikọ gị, na-atụgharị njikọ dị ka backlink. Ọrụ dị oke mkpa na ụlọ njikọ na-arụ ọrụ ụdị isi iyi ebe njikọ na-abịa. Nchọpụta ọchụchọ nyochaa akara azụlink site na ọnụ ọgụgụ nke njirimara nke gụnyere ikike nke ngalaba ahụ, ọnụ ọgụgụ na ogo nke njikọ ndị ọzọ na-ezo aka na ngalaba a, mkpa nke ọdịnaya ahụ na ebe nrụọrụ weebụ jikọtara, na na. Ọ bụrụ na ndị a niile na-egosi na a nti utịp, isi iyi weebụ ga-enweta ọkwa dị elu.
Onye nkwado ọ bụla na-enye ụfọdụ ego njikọ njikọ dabere na aha ya, akụkọ ihe mere eme, na ikike ya na niche ahịa ụfọdụ. N'ihi ya, backlinks si na-akwapụta PR 9 ma ọ bụ 10 na ebe nrụọrụ weebụ na-arụ ọrụ karia ogo backlinks dị ala na spammy Mgbakwunye na ebe nrụọrụ weebụ nke na-enweghị uru ọ bụla maka ndị ọrụ.
Na ihe niile kwuru, ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwado na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ Google, ịkwesịrị inweta nwetaghachite dị mma na mma azụ sitere na ebe nrụọrụ weebụ dị elu.
N'isiokwu a, anyị ga-atụle ọtụtụ ụzọ aghụghọ dị iche iche esi esi nweta akara azụ azụ dị mma. Nwere olileanya na usoro ndị a ga - enyere gị aka ịkwado saịtị gị maka usoro ọchụchọ gị. Ya mere, ka anyị lebakwuo anya na usoro njikọ ụlọ ọrụ a.
Ụzọ dị mfe iji nweta backlinks na saịtị gị
ohere iji mee ka profaịlụ backlink gị na nkwado dị mkpa site na saịtị ndị ikikere. Mgbe ọ bụla ị zụrụ ụfọdụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị bara uru n'aka gị, ịnwere ike ịhapụ njirimara na saịtị. Akaebe ga-enwe njikọ na saịtị gị n'ime ha iji gosipụta na a na-emepụta nlele anya. Ọ ga - enyere gị aka ị nweta nlọghachi azụ dị mfe na saịtị gị n'ejighị ego ọ bụla. Ọ bụrụ na ha na-etinye njikọ njikọ ala na nyocha gị, ị nwere ike ịrịọ ha ka ha gbanwee ya na njikọ ndụ dofollow.
Akwụkwọ ndekọ RSS
Ị nwere ike ịchọta ọtụtụ akwụkwọ ndekọ aha na saịtị weebụ nke na-eme ka ndị ọrụ nyochaa blọọgụ dị iche iche, forums, ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ dị iche iche. Ọ bụ ohere zuru oke maka ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla iji nweta backlink free dofollow site na otu n'ime akwụkwọ ndekọ ndị a dị mkpa. Ihe niile ị chọrọ bụ ịnye ndepụta RSS gị na akwụkwọ ndekọ ndị a. Ị nwere ike iji aka, maọbụ na-akpaghị aka. Ọ bụrụ na ịchọrọ ime ya na akpaghị aka, ịnwere ike iji usoro ihe omume a na-akpọ Fast RSS Submitter. Usoro a ga - enyere gị aka ịnyefee ngalaba gị na ihe karịrị 100 akwụkwọ ndekọ RSS na-akpaghị aka, ichekwa ọtụtụ oge na mgbalị Source .